HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Yorobà
9 AOGOSITRA 2016
Maromaro izao ny tovolahy Vavolombelona manao fanompoana sivily any Armenia. Izy ireo no anisan’ny voalohany manao an’izany. Sady manao asa soa izy ireo amin’izany no mahavita ny adidiny amin’ny fireneny. Nogadraina ny tanora vavolombelona tsy nety nanao miaramila talohan’ireo. Nanitsy ny lalàny anefa ny Repoblikan’i Armenia tamin’ny 2013, mba ho afaka hanao fanompoana sivily izay tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Efa 200 mahery izao ny Vavolombelon’i Jehovah nisoratra anarana hanao an’io fanompoam-pirenena io. Vavolombelona 16 kosa no efa nahavita azy io, tamin’ny faran’ny volana Jona 2016.
Nisy vokany tsara ilay fanompoana sivily
Mbola nogadraina ireo tovolahy Vavolombelona 16 ireo tamin’ny voalohany, noho izy ireo tsy nety nanao miaramila. Rehefa nanan-kery ilay lalàna vaovao izay vao nampanaovina fanompoana sivily izy ireo tamin’ny Janoary 2014. Tao ny nasaina nanamboatra ny endriky ny tanàna, namafa lalana, nanampy ny mpiasan’ny hopitaly, ary tao ny nanao asa hafa ho an’ny fiaraha-monina.
Tena nankasitraka ny fanjakana ireo tovolahy efa nahavita an’ilay fanompoana sivily, satria mba afaka nanao asa soa, ohatra hoe nanatsaratsara ny endriky ny tanàna, na nanampy ny sahirana. Mbola ho afaka hiasa tsara hoatran’ny olom-pirenena rehetra izay tovolahy mahavita an’io fanompoana io, fa tsy hosokajin’ny fanjakana ho mpanao heloka bevava intsony.
Nasaina nanampy tany amin’ny trano fitaizana be antitra i Davit Arakelyan, 22 taona, ary efa nahavita an’ilay fanompoana sivily. Hoy izy: “Tena lasa matotra sy mahay mandray andraikitra ary mazoto miasa kokoa aho izao. Faly aho nanao an’ilay fanompoam-pirenena, satria tena manampy olona ilay izy. Nidera anay daholo na ny mpiandraikitra an’ilay trano fitaizana be antitra, na ny mpiasa tao, ary na dia ny be taona sasany aza.” I Mikhayil Manasyan indray nasaina niasa tany amin’ny Minisitera Misahana An’izay Loza Mitranga. Hoy io tovolahy 22 taona io: “Lasa nahay asa anankiray aho, ary azoko atao anton’asa mihitsy ilay izy. Mba afaka nanao fanompoam-pirenena koa aho nefa tsy nenjehin’ny eritreritro.”
Mba hanao hoatran’i Armenia koa ve ny firenena hafa?
Vao haingana i Armenia no nanitsy ny lalàm-panorenany, ka lasa nekeny ny zon’izay tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Tamin’ny Desambra 2015 ilay lalàm-panorenana nahitsy no nanomboka nanan-kery. Izao no voalazan’ny Andininy Faha-41(3): “Manan-jo hanao fanompoana sivily voalazan’ny lalàna ny olom-pirenena rehetra, na iza izy na iza, raha hoe raran’ny fivavahany na mifanohitra amin’ny zavatra inoany ny fanaovana miaramila.” Nidera an’i Armenia àry ny Vaomieran’ny Filan-kevitra Eoropeanina any Venise. Iny fanitsiana nataony iny, hono, no “fomba tsara indrindra hampiharana an’ilay didy nivoaka tamin’ilay raharaha Bayatyan Miady Amin’i Armenia. * Tena niavaka mantsy iny raharaha iny.”
Izao i Armenia vao mba manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Nanasazy an’izay olona tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana mantsy izy taloha, fa izao kosa izy lasa manaja ny zon’izy ireo. Tena misy vokany tsara ilay fanompoana sivily, ka modely ho an’ny firenena hafa izay mbola manasazy olona tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana. Hita tamin’iny nataon’i Armenia iny fa tsy ny fanjakana ihany no mandray soa fa ny olom-pirenena koa.
Hoy i Tigran Harutyunyan, solontenan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Armenia: “Mankasitraka ny nataon’ny fanjakana armenianina izahay fa manaja ny zon’olombelona izy ireo, anisan’izany ny zo tsy hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretana. Afaka mamita ny adidiny amin’ny firenena izao ny tovolahy Vavolombelona eto Armenia. Manampy ny hafa ry zareo amin’ilay izy nefa koa tsy enjehin’ny eritreriny.”
^ feh. 8 Tena manan-tantara ny didim-pitsarana navoakan’ny Filan-kevitra Ambony Indrindra ao Amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona, tamin’ilay raharaha Bayatyan Miady Amin’i Armenia ([GC], no. 23459/03, ECHR 2011). Izay io Fitsarana io vao namoaka didy hoe azo ampiasaina iarovana ny zon’izay tsy mety hanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny Andininy Faha-9 (zo haneho hevitra sy hanaraka ny feon’ny fieritreretana ary hanaraka an’izay fivavahana tiany) amin’ny Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona.
Nahomby Ilay Fandaharana Momba ny Fanompoana Sivily any Armenia